Jaamacadda SIU oo siminaar aqoon kororsi ah u qabatay Macalimiin “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Jaamacadda SIU oo siminaar aqoon kororsi ah u qabatay Macalimiin “SAWIRRO”
Siminaarkan Aqoon kororsiga ah ayaa waxaa ka faa’iideysanayay 200 oo ah Macalimiinta wax ka dhiga Dugsiyada Sare ee ku yaala Gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah Gobollada Dalka kaasi oo uu ka soo qeylay Agaasimaha WaaxdaTacliinta sare ee Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xakuumada Federaalka Soomaaliya, iyadoo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Jaamacdda SIU, laguna qabtay magaalada Muqdisho.
Siminaarka ayaa waxaa loogu tala galay in sare loogu qaado Aqoonta Macalimiinta Soomaaliyeed si loo tayeeyo Tayada Macalimiinta wax ka dhiga Iskuulada magaalada Muqdisho.
Guddoomiye ku-xigeenka Jaamacadda SIU Shaafici Diiriye Cabdi ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay siminaarkan uu yahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta Macalimiinta fursadda u heshay, wuxuuna kula dardaarmay Macalimiinta inay uga faa’iideeyaan bulshada inteeda kale.
“Macalimiinta waa in ay xooga saaraan sidii ay u kordhin lahaayeen tahayada Waxbarashada ardayda Soomaaliyeed si loo helo arday diyaarsan ee mustaqbalka wax soo saara” ayuu yiri Shaafici Diiriye.
Agaasimaha Waaxda Tacliinta sare ee Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdishakuur Sheekh Xasan ayaa ku Booriyay Macalimiinta inay door muuqdo ka qaataan sare u qaadidda aqoonta ardayda ay wax barayaan iyo tarbiyeyntooda , waxaana uu intaa ku daray in Wasaaraddu ay marwaliba garab taagantahay Macalimiinta.
“Waxaan kula dardaarmayaa macalimiinta Soomaaliyeed in ay kordhiyaan aqoontooda si ay ugu helaan ardayda ay wax barayaan aqoon tayeysan”.ayuu yiri Cabdishakuur.
Jubbaland oo dayactireysa Buundooyinkii ku burburay fatahaaddii Webiga Jubba “SAWIRRO”
Qaramada Midoobay oo go’aano ka soo saartay carruur lagu laayay Yeman